ophahleni Soffits ngoba amathuba abo nokusebenza abangu kabanzi ezihlukahlukene ukwakha ukwakhiwa kanye nokuvuselelwa kwazo. Bangaphinde ingasetshenziswa njengendlela impahla ambozwe for kokuphothula imisebenzi.
Ukufakwa spotlight lufanele lwenteke kulamazinga lalandzelako kuhambisana nazo zonke izimfuneko ethulwa ngumkhiqizi. Ngezinye amazinga iphutha, lo msebenzi kungaholela Ukuwohloka ukubukeka njengoba izakhiwo ngokwabo futhi izingxenye zalo. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ukubekela up izakhiwo ngosizo ongoti abaqeqeshiwe.
Kukhona izinhlobonhlobo eziningana kubo:
1. perforated soffit
Kungaba double noma kathathu. Lokhu Sihlukaniswe saba sobala ne perforation ephelele, ne okuqhubekayo perforation, perforated maphakathi.
isicelo sabo sizonikeza emoyeni esanele isikhala elise ngaphansi kophahla isakhiwo. panel Solid ngokuvamile sheathe ukuphela (gable) overhangs. Ngesikhathi kuhlangana ukuze zamapulangwe soffit ukufakwa emincane noma J-iphrofayli.
lashukumisa steel nge khona okuvikela polymer enamathela ;: izinto ezifanayo zisetshenziselwa akhiqize zamapulangwe kanye soffit plastisol, ithafa futhi matte-polyester, le Puranas; aluminium noma vinyl-polymer enamathela. Kudingekile ukuba sifeze kokuqeda emakhoneni ezindaweni contiguity ka spotlight ukuze zamapulangwe. Lesi senzo senza usebenzisa ekhoneni kwangaphakathi.
Lezi spotlight ukwakha uphahla noma izici utilitarian nje kuphela kodwa futhi zokuhlobisa. Yamanje ngokucubungula izinto amasu uvumele ukuhlinzeka izinga okusezingeni onokwethenjelwa umklamo esiphelele. Ngenxa yalokho, indlu ngeke likhanga futhi uzilungise kahle, futhi izothatha isikhathi eside, okuyinto kuzonciphisa izindleko sokubuyiselwa unomphela. Kodwa lokhu kudinga ukuqaliswa ngendlela efanele ukufakwa.
2. Brown ophahleni soffit
It lenzelwa kokuphothula Ingaphandle ezaziphase isakhiwo, umelana kahle ilanga, umoya, ukushisa high and low. Ngenxa isisindo sabo ongaphakeme, lezi spotlight kungenziwa athuthwe kalula futhi efakwe ngezinye izikhathi ingaba umthombo ngaphandle amathuluzi ezikhethekile. Ngakho-ke, kungenzeka ukwenza ukufakwa ne zabo ezandleni, kwaphumela ekutheni imali. Lezi spotlight ukwakha uphahla noma abe izindleko sasivumela ezinengqondo.
3. Kukhona futhi metal soffits ngaphansi kwesihlahla, ngawo sutured futhi ukuhlomisa gables futhi uphahla ophahla. Le nguqulo senziwa perforation longitudinal, izimbobo ie kuthiwa sawela ukuqinisekisa ukubamba ukupholisa isikhala ngaphansi kophahla. Ngaphezu kwalokho, lezi zakhiwo ukuvikela isikhala ophahleni ngokufaka ezingcolisa ahlukahlukene. Ukufakwa soffits ngaphansi kwesihlahla kulula futhi elula.
Soffits Roof Umphetho usizo enze umsebenzi, usebenzisa izinga impahla, ukugcinwa nezikhathi futhi inikeza kakhulu isivikelo futhi ezinhle ukubukeka kwesakhiwo.
Iwayini aphume ukuminyana, kuphekwe ekhaya
I-Aurobin (amafutha): imiyalelo yokusetshenziswa